Ngwọta Ochie Afọ 11000 Maka Nsogbu Ọgbara Ọhụrụ: Poteto Oge Ochie nwere ike ime nke ọma n'ịgbanwe ihu igwe - Potatoes News
Ngwọta afọ 11000 maka nsogbu ọgbara ọhụrụ: nduku oge ochie nwere ike ime nke ọma na mgbanwe ihu igwe
Ebe ọ bụ ụkọ mmiri ozuzo bụ nsogbu na -adịgide adịgide na Southwest, onye na -elekọta mkpụrụ Hopi/Tewa Valerie Nuvayestewa ji ịnụ ọkụ n'obi sonye na mbọ iweghachite nri ụmụ amaala nke ndị nna nna ya kụrụ maka afọ 11000. Poteto nkuku anọ nwere ike ito n'okpuru ọnọdụ akọrọ ma nye protein ahụ okpukpu atọ yana calcium okpukpu abụọ nke nduku na -acha ọbara ọbara.
Ndị ọkà mmụta sayensị na ndị isi obodo ụmụ amaala nọ na mpaghara ahụ ebidola mwepụta tuber na-eguzogide mmiri ozuzo, nke a maara na sayensị dị ka Solanum jamesii, dị ka ihe ngwọta nri ga-ekwe omume maka ndị mmadụ metụtara mmetụta mgbanwe mgbanwe ihu igwe.
Mahadum ndị ọkà mmụta sayensị nke Utah na ndị na -akwado nri nri ụmụ amaala na -ekwu na spud nwere ike nọrọ na -ehi ụra ruo ọtụtụ afọ n'okpuru ọnọdụ akọrọ, ka na -enye ụmụ mmadụ uru nri dị ka iron na zinc.
"Amabeghị m otu m ga -esi na -etolite etolite, yabụ na nke a ga -abụ ihe ịma aka ka m na -amụta ka m na -etolite."
Mkpa maka ihe ọkụkụ ọhụrụ apụtawanyela ìhè kemgbe Ọgọst 9, mgbe United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change wepụtara akụkọ na -ekwu na mmetụta mmadụ emeela ka ikuku, oké osimiri, na ala dị ọkụ "na -enwetụbeghị ụdị ya" n'ime afọ 2,000 gara aga. Ndị dere IPCC kwuru na a na -atụ anya na ndịda ọdịda anyanwụ ga -ekpo ọkụ karịa ogo 2, ebe ụkọ mmiri na -etokarị n'ime iri afọ na -abịanụ. Oke oke mmiri ozuzo nke nwere ike ibute idei mmiri na -atụkwa anya na ọ ga -abawanye, dịka nnukwu mmiri ozuzo nke oge okpomọkụ na -egosi Arizona, Colorado, New Mexico, na Utah.
Akụkọ merela kemgbe ọtụtụ puku afọ
Ntinye Nuvayestewa na nduku akụkụ anọ bịara n'oge opupu ihe ubi a, mgbe mmemme nri ọdịnala nke Utah Diné Bikéyah kpọrọ ya ka ọ sonye na ọrụ ịkọ mkpụrụ nduku. N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, ndị nchọpụta chọpụtara ihe akaebe na -egosi na nduku ahụ toro na Utah ọtụtụ puku afọ tupu echee na esite na Andes bute nduku na North America.
Cynthia Wilson (Diné), onye ntụzi nke mmemme nri ọdịnala Utah Diné Bikéyah:
"Ndị na -ahụ maka nri na ndị na -ahụ maka gburugburu ebe obibi na -atụ anya 'imegharị' 'Potato Corners anọ. Akọwara ịlaghachi dị ka ịgba ndị obodo na ụmụ mmadụ ndị ọzọ ume ka ha na -akọ ihe ọkụkụ dị iche iche n'ụzọ nkwanye ugwu na nsọpụrụ na gburugburu ebe obibi site na nkuzi na ụkpụrụ. Ya mere, mbọ ijikọ poteto na ndị na -elekọta mkpụrụ amaala dị ka Nuvayestewa. ”
N'oge izizi ya na -eto site na iji mkpụrụ osisi, Nuvayestewa kwuru na ọ gbanyere ha n'obere ite n'oge ọkọchị wee buru nnukwu ite. Ụfọdụ anwụghị n'ịtụgharị ya, mana ọ ka nwere osisi ole na ole fọdụrụ. Ọ na -ezube ịkekọrịta ihe ubi ya mgbe o nyesịrị nke ọma inye ndị ọrụ ubi na ndị ọrụ ugbo nọ n'obodo ya.
"Amalitela m ụdị poteto ndị ọzọ, mana Potato Corners anọ dị iche, ọ naghị amasị oke mmiri. N'ezie, ọ ka chọrọ mmiri ka o too, mana ọ nwekwara ike dina ala ruo mgbe mmiri ozuzo bịara."
“Enwere obere mmiri ozuzo n'ime afọ ise gara aga, ọ bụ naanị n'oge na -adịbeghị anya ka anyị nwetara oke mmiri ozuzo ebe m bi na Mesa nke Mbụ, yabụ anyị na -ahụ ọtụtụ ahịhịa ndụ gburugburu mesas kama nkụ, aja aja, ọhịa. Mmiri ozuzo na -abịa na -ebelata… Ọ dị njọ n'ebe ahụ. ”
Nuvayestewa chetara na onye ọrụ ugbo Hopi, Max Taylor, nyere ya mkpụrụ nduku afọ abụọ gara aga. Mana ọrụ ịkụ mkpụrụ nduku nyere ohere izizi ya ị nweta mkpụrụ tuber sitere na ihe ncheta National Bears Ears na Grand Staircase Escalante National Monument. Ihe ncheta obodo abụọ a bụ ala nna nna na Hopi, Zuni, Diné, Ute, Paiute, na Pueblos na New Mexico.
Dabere na Lisbeth Louderback, onye na -elekọta ihe ọmụmụ mmadụ na Natural Museum of Utah, ndị amaala obodo a, gụnyere Hopi, etolitela kemgbe ihe karịrị afọ 11,000 gara aga. O kwuru na a na -ahụ ha ma na -etokwa na ala ọha dị na ndịda Utah, mana ha emezighị eme ihe maka ịkọ mmadụ.
Ọrụ nna ochie
Nuvayestewa kwuru na ya amụtala uru nri na -eto site n'aka nne na nna ya na nne na nna ya ochie ma na -akụzikwa ụmụ ya.
“Ịmalite ileba anya n'ụzọ dị iche iche nke ịkụ ihe na iwe ihe ntakịrị ntakịrị mmiri ozuzo anyị na -enweta. Kedu otu anyị ga -esi debe iru mmiri ahụ n'ala anyị n'ihi na mmiri ozuzo na -ebelata na ala na -adị oke oke? Ọ dị njọ ebe ahụ. ”
Wilson kwuru na ebumnuche Nduku Nduku bụ maka ndị ọrụ ugbo na ụmụ nwanyị amaala dị ka Nuvayestewa na-eduga ma na-ahazi n'ihu agha nke obodo ha, ọkachasị n'oge ọrịa COVID-19 ebe enwere mmụba nke ịkọ nri mgbe emechiri mkpọchi.
Wilson kwuru na ọ nwere nchekwube n'agbanyeghị ihe ịma aka nke mgbanwe ihu igwe na -ebute n'ihi na ndị amaala na -echekarị maka ojiji mmiri ha. Dịka ọmụmaatụ, obodo ya dị na Oljato, Utah, nwere naanị otu obodo nke ọma - nke a na -ejikarị maka mmiri na -ebute ihe ọkụkụ, ị drinkụ ihe ọ ,ụ ,ụ, ịsa ahụ, ma ọ bụ maka iji anụ ụlọ eme ihe. Tulee nke ahụ na ntọala obodo mepere emepe dịka Salt Lake City ma ọ bụ Phoenix, ebe a na -eji ọdọ mmiri na ahịhịa eme ihe ntụrụndụ.
“Echere m na n'echiche ahụ nke ụkọ mmiri n'ime uche anyị ogologo oge, ọ na -eme ka anyị nwekwuo ekele. Achọrọ m ime ihe banyere ya. ”
Akụkụ nke ọrụ ya, ka o kwuru, gụnyere ịgụnye nchịkọta nke ugbo na -ehi ụra n'akụkụ Osimiri San Juan na San Juan County, Utah, na iji nri ụmụ amaala mee ka ha dịghachi ndụ.
"Ọrụ a maka iweghachi nduku akụkụ anọ bụ ibu ọrụ nna nna ime nkuzi ndị a. Nke mere na anyị chetara ihe mere ndị nna nna anyị hapụụrụ anyị mkpụrụ ndị ahụ, na anyị nwere ike ịlaghachi na omume ndị a na -adigide na ntinye anyị na odida obodo."
Ọ gbakwụnyere na ọ nwere olile anya na ọrụ ya ga -enyere ndị mmadụ aka ijikọ nkuzi nke ndị nna ochie.
"Otu esi akụ mkpụrụ, na otu esi echekwa mmiri, chekwaa ala, ma na -enye onyinye anyị ka anyị na -ewepụta ngwa nri anyị, na ọgwụ nke anyị ma na -enyeghachi ala."
“Anyị na -akụ ubi anyị n'agbanyeghị ihe ọ bụla, kwa afọ, n'agbanyeghị ma mmiri ozuzo ma ọ bụ snow. A kụziiri anyị na ị na -akụ ihe, ị nwekwara okwukwe na mmiri ga -abịa ileta ọka na tubers nduku. ”
Tags: Ochie ndukuoge ansogbu
Balaji Wafers na-achọ ndị na-etinye ego
NACHO FRIES BANYE NA TACO BELL MENU